Hookah Suppliers uye Factory - China Hookah Vagadziri
Russian Amazon Inopisa Kutengesa Yakakura Shisha Utsi Hookah...
Nyoka Chimiro Aluminium Animal Hookah
Yakanakisa Hookah muWalnut Ruvara
Hombe Aluminium Girazi Hookah
Dzvanya "kubvunza izvozvi" kuti utange kurongeka
LED Yakajeka Plastic Inotakurika Hookah Factory Wholesale
Kureba 20.5 cm
Kurongedza 1 pcs/bhokisi 50pcs/ctn
Delivery nguva Anenge mazuva gumi nemashanu
Kukura kwechigadzirwa 20.5 * 9.5 * 9.5 cm
2 Hose LED Magetsi Hookah
tinya "kubvunza izvozvi" kutanga kurongeka
Chigadzirwa Chinhu: bhokisi chimiro maviri hose yemagetsi led hookah
chigadzirwa urefu: 41cm
saizi yepasuru: 20X20x30CM
saizi yebhokisi: 62X42X47.5CM
Russian Amazon Hot Kutengesa Yakakura Shisha Smoke Hookah Wholesale
Mutengo wekutengesa: $30.5
Yakazara seti: danda, bhodhoro, yakakwirira-giredhi crystal silica gel yefodya, ndiro, silica gel uswa, yakakwirira-giredhi Stainless simbi kabhoni clip.
Packing nhamba: 6 seti / bhokisi
Package: bhokisi remavara
Huremu humwe: 3.5kg
Saizi yebhokisi remavara: 22.5 * 22.5 * 30cm
Bhokisi geji: 70 * 46 * 32cm
Uremu hwemudziyo wakakwana: 22kg
Dehenya Rinosvuta Gasi Mask Hookah
Dzvanya "Inquiry Zvino" kutanga kurongeka
Carton Size: 55 * 48 * 50CM
tinya "kubvunza izvozvi" kuti utange kurongeka!
Acrylic Portable Bhokisi Hookah Shisha Ine LED Chiedza
Hookah Kurema: 1.10 kg
Hookah Kureba: 6.5 cm
Hookah Width: 23 cm
Hookah OEM: Yakagadzirirwa Brand
4 hose hombe hombe ine led light
Unogona kusarudza 1-4 hose yehookah iyi, isu tiri veChinese mutengesi, mutengo wakachipa wegorosari uye zvese zvine stock!
Kuti uwane mamwe sepcs uye mutengo wakazara, ndapota tinya "kubvunza izvozvi" kuti uwane rumwe ruzivo!
Muenzaniso Nha.: YH-SY0809
Chigadzirwa Kureba: 22 * ​​53CM
Ruvara: Zvakafanana nemufananidzo
Carton Size: 68 * 56 * 34cm / 16.5kgs
Yakapendwa Hookah ine Leather Hose
2 ~ 4hose batanidza;
Gradient muraraungu ruvara simbi girazi hookah
Muenzaniso Nha. SY1260
Material Stainless simbi
Ruvara rwepepuru, bhuruu, orenji, girinhi
Isu takananga fekitori, inogona kuunza munguva pfupi uye dhizaini semufananidzo wako.
Isu takavakirwa muYIWU, tine akawanda ega maitiro, saka mutengo wedu wakadzikira anenge gumi muzana pane mumwe mutengesi.
Kana iwe uchida huwandu hudiki, isu tinogona zvakare kupa stock, uye gadzirisa MOQ inongova 100pcs.
Tine 100% cheki chemhando uye vimbiso, kana paine yakaputswa paunogamuchira, isu tichazara muripo.
Nzira yekutanga kurongeka?
Unogona kudzvanya "Bvunza Zvino" kutumira kubvunza, uye isu tichakupindura neemail munguva pfupi (Muvhuro kusvika Chishanu, pindura mukati memaawa gumi nemaviri; kupera kwevhiki, pindura mukati meawa makumi maviri nemana)
Kana iwe uri muridzi wechiratidzo: unogona kutitumira mafoto kana masampuli ekugadzirisa. Isu tine timu yehunyanzvi yevagadziri uye vagadziri vepatani vanokupa madhizaini uye nekukurumidza makotesheni. Kazhinji nguva yekuenzanisira yekurongedza kwetsika ndeyemazuva matatu, uye nguva yemasampula etsika mazuva mashanu-7. Zvinogona kutora nguva yakareba kana paine chirongwa chakakosha.
Kana iwe uri chitoro chezvitoro: akawanda epurasitiki hookah ari mustock, isu tinotsigira akagadziridzwa marogo uye diki-mwero muholeseji (anopfuura bhokisi rimwe). Kune simbi hookahs, unofanirwa kutibata nesu kuti tisimbise iyo inventory.
Zvese zvigadzirwa zvinosarudzwa kubva kune yekutanga-kirasi mhando-zvitsva zvinhu, uye zvinhu zvakadzokororwa hazvishandiswe, zvinosangana nezviyero zvegiredhi rekudya.
Isu tinovimbisa kuti zvigadzirwa zvichaongororwa 100% zvisati zvatumirwa, uye chero zvigadzirwa zvidiki zvakaremara zvichatsiviwa. Kuti udzivise kukuvadzwa kunokonzerwa panguva yekusununguka, isu tinopa 1% yezvisara, uye isu ticharipa chero kukuvadzwa kunokonzerwa ne Logistics.
Kusanganisira asi kwete kugumira ku:
Bvisa kukanganisa kushanda
Rongedza nekungwarira uye kakawanda kudzivirira kukuvara mumugwagwa
Hapana kana kudhindwa kusipo kana kujeka muchikamu chakadhindwa
Hapana mabhubhu asina kuenzana pagirazi repamusoro
Hapana chakapfapfaidza chisina kuenzana panzvimbo yakapendwa
Zvese accessories hazvina kupfekwa
Lemon Ruvara Tall Glass Hookah
Muenzaniso Nha.: YH-SY0806
Chigadzirwa Kureba: 16 * 70CM
zvinhu: Girazi + aluminium alloy
Carton Size: 68 * 62 * 60cm / 24kgs
Muenzaniso Nha.: YH-SY9122BL
Chigadzirwa Kureba: 20.6 * 61CM
Material: Girazi+Stainless simbi+aluminium alloy
Carton Size: 66.5 * 45 * 34.5cm/21kgs
Zvose zvikamu zvinogona kugadzirisa sefaira rekugadzira.
Isu tiri fekitori yakananga, mutengo wakaderera anenge 10% pane musika,
tinokugamuchirai kubvunza nesu!
Muenzaniso Nha.: SY0133
Kutakura: 25 * 25 * 52cm
Kubva payakatangwa, fekitori yedu yanga ichigadzira zvigadzirwa zvepasi rose nekutevedzera musimboti
zvemhando yekutanga. Zvigadzirwa zvedu zvakawana mukurumbira wakanaka muindastiri uye kuvimbika kwakakosha pakati pevatengi vatsva nevakuru..